शिव र शक्ति – हाम्रो ब्रह्माण्डमा हरेक प्राणीका ब्रह्माण्डीय अभिभावक (बहु)
शिव र शक्ति यस संसारमा हरेक जीवित प्राणीका ब्रह्माण्डीय अभिभावक हुन्। शिव समय हो र शक्ति अन्तरिक्ष हो। तिनीहरूले मिलेर यो ब्रह्माण्डलाई ठूलो धमाकाको साथ सिर्जना गरे। दिव्यांशुले शिव र शक्तिको वैज्ञानिक अवधारणाहरू व्याख्या गर्छन् दिव्यांशु सिंह चौहान प्राविधिक उद्यमी र वैदिक अनुसन्धानकर्ता हुन्। दिव्यांशुले आफ्नो प्लेटफर्म www.ABCnakshatra.com मार्फत 130 देशहरूमा 1 मिलियन भन्दा बढी …
शिव र शक्ति – हाम्रो ब्रह्माण्डमा हरेक प्राणीका ब्रह्माण्डीय अभिभावक (बहु) Read More »
प्रधानमन्त्री मोदी यही मे १६ मा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी जाने तयारीमा छन्
सन् २०१९ मा पुनः निर्वाचित भएपछि सन् २०२२ मा प्रधानमन्त्री मोदीको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हुनेछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वैशाख ३ गते नेपालस्थित गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जाने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अनिल परियारको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री मोदीले हिमालयन देशको भ्रमण गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने कार्यक्रम छ …
प्रधानमन्त्री मोदी यही मे १६ मा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी जाने तयारीमा छन् Read More »
आमाको मुख हेर्ने दिनको सुरुवात र आज कसरी मनाइन्छ ?
मानिसहरूले लामो समयदेखि मातृ दिवस मनाउँदै आएका छन्। ग्रीक र रोमीहरूले माता देवीहरूको उत्सव मनाउन उत्सव मनाउने गर्थे। तर आमाको दिन हामी जान्दछौं कि यो युरोपमा सुरु भयो। लेन्टको चौथो आइतवारमा, मानिसहरू विशेष सेवाको लागि आफ्नो घर नजिकैको मुख्य चर्चमा जान्छन्। तर समयको साथ, आमाको दिन एक धर्मनिरपेक्ष छुट्टीमा परिणत भयो जहाँ बच्चाहरूले आफ्ना आमाहरूलाई …
आमाको मुख हेर्ने दिनको सुरुवात र आज कसरी मनाइन्छ ? Read More »
बुद्ध पूर्णिमा २०२२ कहिले हुन्छ? – मिति, तिथी, उद्धरण र महत्व जान्नुहोस्
भगवान बुद्ध द्वारा एक प्रसिद्ध उद्धरण: “यद्यपि, तपाईंले धेरै पवित्र वचनहरू पढ्नुभयो, जतिसुकै धेरै बोल्नुहुन्छ, यदि तपाईंले ती कार्यहरू नगर्नुभएमा तिनीहरूले तपाईंलाई के फाइदा गर्नेछन्?” गौतम बुद्धबुद्ध धर्मका संस्थापक, वैशाख महिनाको पूर्णिमा तिथीमा जन्मेका थिए। यद्यपि, परम्परागत क्यालेन्डर चन्द्र चक्र अनुसार निर्धारण गरिएको हुनाले, ग्रेगोरियन क्यालेन्डरमा मिति वार्षिक रूपमा भिन्न हुन्छ। बुद्ध धर्मका प्रवर्तक सिद्धार्थ …
बुद्ध पूर्णिमा २०२२ कहिले हुन्छ? – मिति, तिथी, उद्धरण र महत्व जान्नुहोस् Read More »
शीर्ष सुविधाहरू, मूल्य, विशिष्टता, भारतमा उपलब्धता र जान्नको लागि सबै कुरा
यहाँ Google Pixel 6a को बारेमा केही द्रुत विवरणहरू छन्। गुगलले 11 मे, 2022 (बुधवार रात) मा तिनीहरूको I/O 2022 विकासकर्ता कीनोट कार्यक्रममा नयाँ Pixel 6a घोषणा गर्‍यो। यसले फ्ल्यागशिप मोडेल Pixel6र Pixel6Pro जस्ता धेरै डिजाइन तत्वहरू साझा गर्दछ र यसको मूल्य Pixel 5a जस्तै छ। भारतको लागि, रिलीज मिति यस …
शीर्ष सुविधाहरू, मूल्य, विशिष्टता, भारतमा उपलब्धता र जान्नको लागि सबै कुरा Read More »